Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy
1 Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 28th March 2009, 8:44 pm
အခုတလော Gtalk တွေဖွင့်လို့မရတဲ့ ပြဿနာတွေကိုကြုံနေရပါတယ်...ဒီ Proxy ကို Gtalk မှာ Add လိုက်ရင် Sign in က အရင်ကထက်တောင် မြန်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်...စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ....
70.85.16.16 Prot ကတော့ 80 ပါ....
2 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 29th March 2009, 4:02 pm
နောက်ထပ် အသုံးပြုလို့ရတဲ့ PROXY ပါ
Host က 70.20.20.30 နဲ့ Port ကတော့ အပေါ်က အတိုင်းဘဲ 80 ပါ...
3 နောက်တစ်ခုက on 30th March 2009, 10:44 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 32
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-03-25
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 66
port က 80 ပါ ...
ကျွန်တော်အထင်ကတော့ အခုတစ်လော ကော်နက်ရှင်မရတဲ့ ကာလမှာ ...
ip တွေချိန်းပြီးတက်တာက အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ...
Port ကိုတော့ 80 ပဲသုံးစေချင်ပါတယ် ...
Port 80 သုံးပြီး တက်တဲ့Ip တော်တော်များများကို ဖွင့်ထားပေးတယ်လို့ လဲ ကြားပါတယ် ...
4 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 30th March 2009, 8:48 pm
ဒါလဲ ရတာပါပဲ 20.30.70.80 Port ကတော့ အပေါ်ဘက်တွေကအတိုင်းပေါ့ 80 ပါပဲ...
5 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 3rd April 2009, 6:19 pm
အခု ကျနော် နောက်ဆုံးသုံးနေတဲ့ Proxy ပါ
70.50.100.30 Port 80
6 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 9th July 2009, 8:31 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-07-08
အဲဒီ Proxy တွေက ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲ. ဆော့ဝဲလ်တခုခုကိုသုံးပြီးမှ ထည့်ရမှာလား. ဒါမှမဟုတ် ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲ Gtalk ထဲမှာ Proxy ရိုက်ထည့်ပြီး တန်းသုံးလို့ရလားဆိုတာ ပြောပြပေးပါနော်....
7 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 9th July 2009, 2:27 pm
gtalk ကိုမဖွင့်ခင်မှာ setting ကိုသွားလိုက်ပါ ပြီးရင် connection ကိုသွားပြီးတော့ use the following proxy ကိုရွေးလိုက်ပါ...ပြီးသွားရင်တော့ host နေရာတွေ port နေရာတွေမှာ အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ နံပါတ်တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ ok နဲ့ထွက်ပြီး sign in လုပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ...
8 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 10th July 2009, 8:32 pm
9 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 11th July 2009, 3:25 pm
ဘာများမှားနေလဲမသိဘူးနော်.. ကျွန်တော်အကိုတို့ ပြောသလိုဝင်တာပါပဲ.. တခုမှကိုဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်.. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါအုံးနော်.. အကိုတို့က ဘယ်နိုင်ငံကသုံးနေကြတာလဲ. ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည် ပဲခူးကသုံးနေတာပါ.. ဘာလို့မရတာလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါနော်.
10 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 11th July 2009, 6:07 pm
တချို့ ဆိုင်တွေမှာ Proxy ကို Change ခွင့်မပေးပါဘူး...
MPT ကနေပြီးတော့ ယူထားတဲ့ လိုင်းကို သုံးတဲ့ ဆိုင်တွေဆိုရင်လည်း ပြောင်းခွင့်မရှိပါဘူး...
11 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 11th July 2009, 8:08 pm
အခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ proxy က browser မှာလည်း သုံးလို့ရတယ်
port က 443
သူက ဆော်ဒီ အာရေဗျက proxy ဆိုတော့
gmail ဖွင့်ရင် သူတို့ ဘာသာနဲ့ တက်တက်လာတာတစ်ခုပဲ
Last edited by Kira on 12th July 2009, 7:45 pm; edited 1 time in total
12 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 12th July 2009, 5:01 am
ကျွန်တော် တခု ၀င်ပြောမယ်နော် .. သိရင်လည်း sorry နော် ... proxy အသစ် ရှာနည်းလေး ပါ ....
Start >> Run >> cmd >> nslookup cache.bagan.net.mm
13 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 12th July 2009, 9:28 am
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်တို့လိုင်းက MPT ကယူထားတဲ့လိုင်းပါ.. အဲဒါကြောင့် Proxy ပြောင်းသုံးခွင့်မပေးတာနေမယ်...kohtet ပြောတဲ့ Proxy တွေကိုလည်း သုံးပြီးပါပြီ. သို့ပေမဲ့..ကရင်တွေကတဲ့ အကအတိုင်း(ဒုံရင်း) ပါပဲ.. မရပါ... Website ကနေမချက်ပဲ Gtalk ကိုပဲသုံးလို့ရတဲ့ တခြားနည်းလမ်းလေးများ မစပါကုန်......
14 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 12th July 2009, 9:32 am
MPT ကယူလိုက်လို့ ပြောင်းသုံးလို့မရတာပါ...
ကိုထက် ပြောတဲ့ နည်းက တော့ ကျနော်လည်း နားမလည်ဘူးခင်ဗျ....
Web base Messenger တွေလည်းရှိပါတယ်... meeboo တို့လိုမျိုးတွေ သုံးပြီးချက်ကြပေါ့...
15 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 12th July 2009, 2:29 pm
kohtet wrote: ကျွန်တော် တခု ၀င်ပြောမယ်နော် .. သိရင်လည်း sorry နော် ... proxy အသစ် ရှာနည်းလေး ပါ ....
Name : cache.bagan.net.mm
Address : ထဲမှာ အများကြီးကျလာပါတယ်....
Address ထဲက ဟာတွေကို Port ဘယ်လောက်နဲ့ တွဲသုံးရတယ်ဆိုတာလေးတွေပါ ရှင်းပြပေးပါလားဗျာ...
16 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 12th July 2009, 8:35 pm
ဒီကောင်က proxy လေးပဲ ရှာပေးတာပါ ... ports ကိုတော့ ဘယ်လို တွဲ သုံးတယ် မသိဘူးဗျ ....ports ကိုတော့ g talk မှာ ဘယ်နေရာ ဖြစ်ဖြစ် သုံးရလို့ရမယ်လို့ပြောထားတဲ့ 443 ကို ပဲ စမ်းထည့် ပြီးသုံးကြည့်လိုက်ဦးနော် ... တကယ်လို့  ရခဲ့ရင် တော့ ပြောပြပါ့မယ်..
17 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 15th July 2009, 4:05 am
အခုမှပဲ သိတော.တယ်ဗျာ...နောက်လည်း အသစ်ဆန်းတွေ ရှိရင် ပြောပြပေးပါဦးဗျာ..
18 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 16th July 2009, 5:24 am
ကျွန်တော် စောစောက ပြောတဲ့ nslookup ဆိုတာနဲ့ site တွေရဲ့ ip address ကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ကြည့်လို့ရပါတယ် ...
start -- run --- cmd --- nslookup ---- [You must be registered and logged in to see this link.]
ကိုယ်သိချင်တဲ့ site ရဲ့ နာမည်ကလေးတွေ ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ ကြည့်လို့ရပါတယ် .....
19 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 17th July 2009, 6:08 am
ဒီနည်းလေးကတော့ site ရဲ့ ip ကို ကြည့်တဲ့ နောက်တစ်နည်းပါ ...
start>run>cmd>ping [You must be registered and logged in to see this link.]
20 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 28th September 2009, 10:10 am
g-talk ကတော့ မြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေး(လ်)က မရဘူး ဖြစ်နေတယ်လေ
မေး ဖွင့်လို့ရတဲ့ နံပါတ်လေးကော ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပေးပါအုန်း ရှင်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
21 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 28th September 2009, 1:17 pm
Mail ကော Talk ကော
22 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 25th February 2010, 12:44 pm
Proxy 212.93.193.88 port 443 နဲ့ သုံးရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
23 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 26th February 2010, 5:51 pm
လောလော ဆယ်တော့ 70.20.10.30 port 80 အသုံးများတယ်
တော်တော် တော့ မြန်ပါတယ်
တစ်ခါတစ်လေတော့ mail ဖွင့်လို့မရဘူး
24 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 27th February 2010, 9:39 am
မေး ဖွင့်လို့ရတဲ့ နံပါတ်လေးကော ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပေးပါအုန်း ရှင်။
အပေါ်ကပြောထားသလို ဆော်ဒီ proxy နဲ့သုံးကြည့်ပါလားအမရေ။
212.93.193.83 = 443
212.93.193.88 = 443
212.93.193.89 = 443
25 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 16th March 2010, 6:07 pm
ကောင်းတယ်ဗျို့...ဒါပေမယ့် web browsing မှာကောသုံးလို့ရလားဟင်
26 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy on 16th March 2010, 6:08 pm
ဆော်ဒီ proxy ကိုထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။။
27 Re: Gtalk မှာ Conn ကျနေတုန်း သုံးလို့ရမယ့် Proxy